संक्रामक रोग र जलवायु परिवर्तनबीच पक्कै सम्बन्ध छ : उत्तमबाबु श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता] | Uttam Babu Shrestha
संक्रामक रोग र जलवायु परिवर्तनबीच पक्कै सम्बन्ध छ : उत्तमबाबु श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वनस्पतिशास्त्रमा एमएस्सी, अमेरिकाको नर्थस्टर्न विश्वविद्यालयबाट भौगोलिक सूचना प्रविधिमा मास्टर्स र युनिभर्सिटी अफ म्यासेचुसेट्सबाट वातावरण विज्ञानमा पिएचडी गरेका उत्तमबाबु श्रेष्ठ ६ बर्षयता अष्ट्रेलियाको एक विश्वविद्यालयमा रिसर्च फेलो र सिनियर रिसर्च फेलोको रुपमा काम गर्दै थिए। त्यसलाई छोडेर नेपालमा नै स्थायी रुपमा बस्ने गरेर पाँच हप्ताअघि नेपाल फर्किएका हुन्।
श्रेष्ठसँग उनको क्वारेन्टाइन दैनिकी, वातावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन र रोगहरुको सम्बन्धबारे नेपाल लाइभका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीः
लकडाउनमा दिनहरु कसरी बित्दैछन्?
घरमा नै बसेर लेख्ने, पढ्ने, बच्चाहरुसँग खेल्ने र अनुसन्धानका कामहरु गरिरहेको छु। कोरोनालाई रोकथामको लागि संसारभर लकडाउन हुन थालेपछि विश्वका ४० प्रमुख सहरहरुको लकडाउनले वायु प्रदुषणको अवस्थामा कस्तो फेरबदल ल्यायो भन्ने एउटा अनुसन्धान सकायौं। त्यसको नतिजा प्रकाशोन्मुख छ।
त्यसको लागि हाम्रो संस्थाका तीन जना र अष्ट्रेलिया र जर्मनीका तीन जना अनुसन्धानकर्ताले तीन हप्तायता लगभग २४ सै घन्टा पालैपालो काम गर्‍यौं।
कस्ताकस्ता पुस्तकहरु पढिरहनुभएको छ?
यस्तो घरै बस्न पाएको समयमा पनि एउटा दूर्भाग्य हो कि यतिखेर मैले अनुसन्धान बाहेकका अन्य रुचीका किताबहरु पढ्ने मौका मिलेको छैन। कोभिड—१९ सुरु भएपछि हामीले आफ्नो ठाँउबाट यसै सम्बन्धी र हाम्रो विषयका अनुसन्धानका विषयवस्तुहरुको खोजी गर्न लाग्यौं र त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यौं।
म जनस्वास्थ्यको विषयको अध्येता नभए पनि जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका थुप्रै आयामहरुमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न थालें। लकडाउन र वायु प्रदुषणको अनुसन्धानले पनि समय खायो। अखबारी लेखनले थप व्यस्त बनायो। तर लेख लेख्ने क्रममा David Quammen को पुस्तक Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic पढियो। वन्यजन्तुबाट मानिसमा सर्ने रोगका बारेमा लेखिएको पुस्तक यतिखेर धेरै सान्दर्भिक छ।
लामो समय विदेशमा बसेर किन यतिबेला नेपाल फर्किनुभयो?
विदेशिने सबैमा स्वदेश फर्कने अतृप्त चाहना हुँदोरहेछ तर कतिले त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। म त्यो चाहनालाई व्यवहारमा उर्तानसक्ने थोरै भाग्यमानीहरु मध्येमा परें। पारिवारिक कारण र आफ्नो रुचीले (बुढेसकालमा किन पहिल्यै नेपाल नफर्किए हुँला भनेर नपछुताउन) नेपाल फर्किए।
तर एक हिसाबले भन्दा म विदेशमा छु जस्तो खासै लाग्दैन थियो। किनभने १५ बर्ष विदेश बस्दा लगभग बर्षैपिच्छे नेपाल आइरहें। विदेशमा कमाएर उतै कर तिरे पनि मेरो अनुसन्धानका विषयहरु नेपालसँग नै सम्बन्धित थियो। यतिखेर नेपाल फर्किए पनि काम हिजो गरेको जस्तै गर्ने हो। यहाँ आइसकेपछि काम गर्नको लागि भनेर पोहर म जस्तै विदेशमा पढेर फर्किएकाहरु मिलेर खोलेको अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्प्लिनरी स्टडिज’को डाइरेक्टरको रुपमा हाल कार्यरत छु।
यस संस्थामा हाल १५ जना रिसर्च फेलोहरु जोडिनुभएको छ। हामीले बहुविधागत (multi-disciplinary) र अन्तरविधागत (interdisciplinary) अनुसन्धानहरुलाई नेपालमा बढाउने र अन्तरविधागत विज्ञान जस्तै सस्टेनेविलिटि साइन्स (sustainability science) को क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका अगुवाहरु जन्माउने र हुर्काउने उद्देश्य राखेका छौं।
मेरो चाहना नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीय अनुसन्धान संस्थाहरु होस् जसले अन्तर्राष्ट्रिय समस्या र विश्वस्तरको अनुसन्धान गरेर ज्ञान उत्पादनमा भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने छ। हामीले खोलेको संस्था पनि त्यस्तैमा परिदेओस् भन्ने अपेक्षा छ। स्थापनाको एकबर्ष भित्र नै यस संस्थामा कार्यरत हामीहरुले विश्वप्रसिद्ध जर्नलहरु साइन्स, नेचर जस्ता प्रकाशनहरुमा आफ्नो अनुसन्धानहरु प्रकाशित गर्न सफल भएका छौं।
विश्वस्तरका अनुसन्धान कोषहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सामेल भएर अनुसन्धान सहायताहरु जुटाउन सफल पनि भएका छौं। भर्खरै लकडाउनपछिको विश्वभरको वायु प्रदुषणको अवस्था हेर्ने सानै भएता पनि विश्वस्तरको अनुसन्धानको काम सकायौं। समग्रमा अहिलेसम्मको यात्रामा यसमा संलग्न साथीहरुको रुची, लगाब र स्वंयसेवी भावनाबाट र यस बाहिरका मानिसहरुबाट पाएको सल्लाह, सुझाब र प्रतिक्रियाबाट उत्साहित छु र भविष्यप्रति आशावादी पनि।
तपाई लामो समय अध्ययन अनुसन्धानको लागि विदेश बस्नुभयो। त्यसको लागि त यहाँभन्दा बाहिरै सुविधा हुन्थ्यो होला नि, होइन?
अनुसन्धानको लागि चाहिने आर्थिक, उपकरण, पुस्तकालय लगायतका स्रोत सामाग्रीहरुको उपलब्धता, अध्येताहरु बीचको नेटवर्क, सिनियर अध्येताहरुले दिने प्रवचनहरुमा सामेल हुन पाइने जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा नेपालमा भन्दा अनुसन्धानको लागि विदेशमा सहजता हुन्छ। साथै, विदेशमा संलग्न संस्थाको विश्वसनीयता, जसले अनुसन्धानको लागि चाहिने सहयोग जुटाउनको लागि मद्त पनि गर्दछ।
तथापी, हामीले गर्न लागेको अनुसन्धानको लागि ठूला, महंगा उपकरण तत्कालै आवश्यक पर्दैनन्। ठूला तथ्यांकहरु विश्लेषण गर्न परे त्यस्ता कम्प्युटरहरु भाडामा लिन पनि सकिन्छ। त्यसकारण नेपालमा बसेर पनि मैले यसअघि विदेशमा हुँदा गरिरहेका कामहरुलाई बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्यो र त्यसको लागि प्रयास त गरौं भनेर कम्फोर्ट ट्रयापबाट बाहिर निस्कने कोसिस गरेको हो। हेरौं कतिसम्म सकिन्छ।
अमेरिकी सहरहरुमा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानले वायु प्रदुषण बढी भएका ठाँउमा कोरोना भाइरसबाट मर्ने दर पनि उच्च पाइएको देखिएको छ।
कतिपय मान्छेहरुले कोरोना महामारीलाई प्रकृतिले मानव जातिलाई लिएको बदला पनि भनिरारहेका छन्। तपाईंले हालसालै विभिन्न पत्रपत्रिकामा वन्यजन्तु र प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्धको बिग्रेकोले महामारी फैलिएको भन्ने कोणबाट लेखहरु पनि लेख्नुभयो। के प्रकृतिले मानवजातिलाई बदला लिएकै हो त?
मलाई पृथ्वीले बदला लिन्छ जस्तो लाग्दैन। पृथ्वी कुनै दैविक शक्ति होइन, बदला लिनको लागि। यो एउटा ग्रह हो, जहाँको वातावरणको कारण जीवन सम्भव भयो। पृथ्वीको लागि नदेखिने भाइरस, ब्याक्टेरियादेखि मानिससम्मको सबै जीवन उस्तै हो। प्रकृतिको त को आफ्नो, को पराई? को ठूलो को सानो? बलियो—निर्धा सबै समान। मानव जाति पनि त्यसको अपवाद होइन।
प्रकृतिमा सबैलाई लाग्ने एउटा नियम छ, जसलाई हामी प्रकृति छनौटको सिद्धान्त भन्छौं। त्यो भनेको प्रकृति प्रदत्त रुपमा जन्मने, बाँच्ने र आफ्नो अनुवंश प्रसारण गर्ने क्रमको संघर्ष, आफ्नै प्रजाति र अन्य प्रजातिका बीचमा। यस पृथ्वीमा रहेका मानिस लगायतका वनस्पति, जनावर, ब्याक्टेरिया, भाइरसले सबैले गर्ने त्यही हो, अर्थात् जन्मने, बाँच्ने र आफ्नो अनुवंश प्रसारण गर्ने हो।
हामीले ब्याक्टेरियाबाट बच्न एन्टिबायोटिक बनायौं। ब्याक्टेरियाले एन्टिबायोटिकले नमर्ने अनुवंशको विकास गर्‍यो। यी सबै बाँच्ने र आफ्नो अनुवंश प्रसारण गर्ने आआफ्नो तरिका वा कला हो। त्यसकारण विहंगम प्रकृतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, अहिलेको कोरोना भाइरसले हामी मानिसले जे गरिरहेका छौं, त्यहि गरेको छ— जन्मने, बाँच्ने र फैलने। मनुष्यको कोणबाट पो यो महामारी, हानिकारक, नराम्रो, बिषाणु आदि इत्यादि। प्रकृतिको लागि त यसमा असल—खराब, राम्रो—नराम्रो के छ र?
जहाँसम्म हाम्रो र प्रकृतिसँगको सम्बन्धको कुरा छ, हामी स्वस्थ हुनको लागि बस्ने घर स्वास्थ्य हुन पर्दछ। तर, औद्योगिक क्रान्तिपछि विशेष गरेर विगत ५० वर्षयता हाम्रो साझा घर पृथ्वीको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ। मानिसको कारण पृथ्वीको जैविक अजैविक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको छ।
मानिससँग दोस्ती राख्ने र उसलाई राम्रो लाग्ने बाहेकका जंगल, जल, जलचर, जीवजन्तु घटेका छन्। हामीले उत्पादन गरेका विकारहरु प्लाष्टिक, हरितगृह ग्यास बढेका छन्। हाम्रै कारण यहाँ निकै छोटो समयमा मौसम परिवर्तन भएको छ। त्यसैले पृथ्वीको जुन प्राकृतिक क्षमता छ, जसमा हाम्रो खाना, औषधि, औद्यागिक कच्चा पदार्थका साथै स्वच्छ पानी, सफा हावा र प्रकोपसँग जुद्ने क्षमतासम्म निर्भर छ, त्यो बिग्रेको छ। त्यस क्षमतामा ह्रास आएको छ।
एक अर्थमा भन्दा हामीले लटरम्म फलेको रुखको फेदलाई हल्लाएका छौं र त्यसबाट थुप्रै फल झरेको छ, त्यो फल कस्तो हुन्छ? त्यसले के हुन्छ भन्ने निकै कम जानकारी हामीलाई छ। हामीसँग भएको जानकारीले विश्वमा ६० प्रतिशत संक्रमण रोग र ७५ प्रतिशत नयाँ बिषाणुको उत्पत्ति स्रोत जंगली जनावरहरु हुन् भन्छ।
पछिल्लो पटक देखिएका महामारी इबोला, मर्स, सार्स, एड्सदेखि नेपालमा धेरै मानिसहरुको लाग्ने रेबिज, इन्फ्लुन्जा, डेंगीको स्रोत पनि जनावर नै हो। यस्ता रोगहरुको संख्या र यसले पार्ने असरको मात्रा बढ्दो छ।
वन्यजन्तुबाट मानिसमा रोग सर्ने के कारणले भइरहेको छ त?
एउटा त माथि नै भनियो। हामीले पृथ्वी नामक रुख हल्लायौं। दोश्रो, वन्यजन्तुसँगको हाम्रो सामिप्यता बढ्यो। तेश्रो, हाम्रो बसाई, व्यापार, यात्रा सबैमा सघनता आयो, जसलाई हामी भूमण्डलीकरण पनि भन्छौं। त्यसको कारण मानिसहरुको संयुक्तता बढ्यो, जसले गर्दा रोग चाँडै फैलने वातावरण बन्न पुग्यो।
यतिखेर विचित्र (एक्जोटिक) का जंगल जनावरहरु प्रयोगशालामा अनुसन्धानको लागि, घरपालुवा साथी (पेट) को रुपमा वा खानाको रुपमा हामीसँग नजिकिने वातावरण बनेको छ। सन् १९३२ ताका न्यूयोर्क विश्वविद्यालयमा पोलियो खोपको बाँदरमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा बाँदरले टोकेर हप्र्स वि भन्ने भाइरस अनुसन्धानकर्तालाई सर्‍यो। त्यस्तै घरमा पालेको सुगाबाट सिटकोसिस (सुगाज्वर), घोडाबाट हेन्ड्रा भाइरस सरे। संसारमा मानिसलाई लामो समय दुःख दिएको प्लेग मुसाबाट सरेको हो।
जंगली जनावारको मासु खाँदा सरेको भनिएको इबोला र चिम्पान्जीसँगको सम्पर्कबाट सरेको भनिएको एड्स त्यसका केही उदाहरण हुन्। त्यसकारण हामीलाई कम जानकारी भएका यस्ता जनावरको किनबेच, मासु खाने, पाल्ने गर्दा उनीहरुको भाइरस हामीमा सर्ने वातावरण बन्यो। अर्को मानिसहरु वनजंगल फडानी गरेर वन्यजन्तुको नजिकै गएर बस्न जान थाले।
ब्राजिलको एम्याजोन क्षेत्रमा १३ बर्षको तथ्यांक केलाएर गरिएको अनुसन्धानले वन फडानीसँगै संक्रमण रोग पनि बढ्ने देखाएको थियो। वनको नजिकै भएका समुदायमा लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु बढी मात्रामा पाइएको थियो। यस्ता विविध मानवीय गतिविधिका कारण यसअघि कहिले नदेखिएको मानव—वन्यजन्तुको सामिप्यता रोग सर्ने पुल बनेको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्। पछिल्लो समयमा देखिएका महामारी सार्स, मर्स र कोभिड १९ को स्रोत चीनको आलो मासु बजार भएको भन्ने देखिनु त्यसको एउटा ठूलो प्रमाण हो।
त्यतिमात्रै होइन अमेरिकी सहरहरुमा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानले वायु प्रदुषण बढी भएका ठाँउमा कोरोना भाइरसबाट मर्ने दर पनि उच्च पाइएको देखिएको छ। त्यसले रोग लाग्न नदिन मात्रै होइन, रोग लागेपछि बच्न पनि स्वास्थ्य वातावरण हुन जरुरी छ भन्ने देखाँउछ।
विनाश नभई विकास हुँदैन भन्ने मानसिकताले विकासको नाममा हामीले विगतको ५० बर्षमा बागमती नदीमात्रै होइन, त्यहाँको सभ्यता, पहिचान, त्यहाँको जलचर सबैको विनाश गर्‍यौं। अब बागमतीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन भनेर विभिन्न आयोजनाहरुमा कति खर्च लागेको छ भन्नुस् त?
वन्यजन्तुको सामिप्यता र प्रकृतिको विनास बाहेक जलवायु परिवर्तनसँग यस्ता महामारीको के सम्बन्ध छ?
वायु प्रदुषण जुन जलवायु परिवर्तनको कारक पनि हो, त्यसले कोरोनाबाट मृत्यु बढाउने कुरा बाहेक अहिले कोरोना भाइरससँग जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धको बारेमा त खासै जानकारी भएको छैन। त्यस सम्बन्धी कुराहरु पढ्न पाएको छैन। यसका अनुसन्धानहरु भइरहेका पनि होलान्। तर संक्रमण रोग र जलवायु परिवर्तनको पक्कै सम्बन्ध छ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त औलो वा डेंगी हो।
जलवायू परिवर्तनको कारण लामखुट्टे केही दशक पहिला नपाइने उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि पाइन थालेका छन्। लामखुट्टेसँगै त्यस्ता ठाँउहरुमा लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरु पनि बढेको छन्। त्यसकारण जलवायु परिवर्तनसँग संक्रमण रोगको फैलाहट पनि बढेको देखिन्छ। त्यस्तै मिचाह प्रजातिका वनस्पति र जनावर पनि जलवायु परिवर्तनसँग फैलिएका छन्। तर पनि यो क्षेत्र अझै बढि अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्र हो।
जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिममा पर्ने देशहरुमध्ये नेपाल उच्च स्थानमा छ। यसको अहिले प्रभाव कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो संकटहरु ल्याउने देख्नुहुन्छ?
मुख्यतः जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रमा (कम उब्जाउ हुने, बालीनाली नफल्ने, किरा र रोगको प्रकोप बढ्ने), खडेरीको कारण पानीको समस्या, अतिवृष्टिले गर्दा बाढी, पहिरो जाने जसले गर्दा मानवीय जीवन, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने। वन, वातावरणमा जलवायु परिवर्तनको कारण विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुहरु लोप हुने र मानव स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने आदि हुन्।
हामीले गरेका अनुसन्धानहरुमा जुन मोडलिङमा आधारित थिए, त्यसले पनि जलवायु परिर्वतनको कारण भविष्यमा महत्वपूर्ण वनस्पतिहरु लोप हुनसक्ने तर मिचाहा प्रजातिहरु बढ्ने देखाएका छन्। यिनै समस्याहरुको कारण मानिसहरु बसाई सर्न बाध्य हुने, थप गरिब हुने आदि छन् र समग्रमा यसले हाम्रो आर्थिक सामाजिक वातावरणीय अवस्थालाई असर पुर्‍याउनेछ।
कतिपय कुराहरु देखिइसकेका छन्। कति हामीलाई थाहै नभई परिवर्तन भइरहेका होलान्। तर जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका कतिपय जोखिम हामीले बुझ्न बाँकी नै छ। यस सम्बन्धि धेरै हल्लाखल्ला भएतापनि अलि विश्वसनिय संश्लेषण हुन बाँकी छ जुन जरुरी छ।
हामीले यत्रो ठूलो आयोजना बनाउँदै छौं तर यसका बारेमा उठेका विविध सवालहरुलाई जवाफ दिंदा र त्यसलाई सम्बोधन गर्दा आयोजनालाई फाइदा नै हुन्छ तर विकास विरोधी भनिदियो, प्रश्नको जवाफ दिन पनि परेन।
नेपालमा एउटा भनाई नै छ- विनाश नगरी विकास आउन्न। साँच्चै यस्तो हो?
तपाईंले विनाश भनेर वातावरण विनाश भन्न खोज्नुभएको होला। नेपाल र सम्भवत संसारभर पनि आर्थिक विकास र वातावरणलाई एक अर्काको विरोधीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा दृष्टिकोण छ, जुन आफैंमा घातक छ।
मेरो बुझाईमा यी दुवै एक अर्काका परिपुरक हुन्। वास्तवमा वातावरण मानव विकासको बाधक होइन, सहयोगी हो। हाम्रो खाना, नाना, औषधि, उद्योगका कच्चा पदार्थ, हावा, पानी सबैको स्रोत वातावरण हो भने यो मानव प्रगतिको बाधक कि साधक?
तर विद्यमानको आर्थिक प्रणालीले श्रम र पुँजीको योगदानमात्रै गणना गर्दछ, आर्थिक वृद्धिलाई मात्रै विकास मान्छ। तर यो फेरिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य हेर्दा पनि थाह हुन्छ विकास भनेको बहुआयामिक कुरा हो भनेर। तथापि चलिआएको आर्थिक प्रणालीले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु, हावाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदानको गणना गर्दैन। किनभने ती सम्पदाहरु कसैको निजी होइन, सबैको सार्वजनिक सम्पत्ति हो।
तपाईंसँग केही छैन भने बाँच्नको लागि के गर्नु हुन्छ? जंगलको कन्दमुल, फलफूल, नदीको माछा मार्ने त हो किनभने त्यो गर्दा तपाईंलाई कसैले रोकतोक गर्दैन नि। त्यस्ता प्रकृतिका सेवा सुविधाको वा योगदानको हिसाब निकाल्न पनि चुनौतिपूर्ण नै छ। थप उद्योगबाट उत्सर्जित हुने प्लाष्टिक, दुषित पानी, ग्यास जस्ता विकारहरु, जसले वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। त्यस्तो घाटाको हिसाब न त कम्पनीले राखेको हुन्छ न त राज्यले गरेको छ।
औद्योगिक विकारको वातावरणमा परेको असरको हिसाब त परै जाओस्, प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असर र त्यसको आर्थिक भारका हिसाब समेत पनि अहिलेको तपाईंले भन्नुभएको विकासको वासलातमा जोडिएको हुँदैन। यस्तो मोडल तात्कालीन रुपमा फाइदाजनक जस्तो देखिए पनि दीर्घकालिन रुपमा घाटाको मोडल हो।
उदाहरणको लागि विनाश नभई विकास हुँदैन भन्ने मानसिकताले विकासको नाममा हामीले विगतको ५० बर्षमा बागमती नदीमात्रै होइन, त्यहाँको सभ्यता, पहिचान, त्यहाँको जलचर सबैको विनाश गर्‍यौं। अब बागमतीलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन भनेर विभिन्न आयोजनाहरुमा कति खर्च लागेको छ भन्नुस् त? सुरुमा नै विकासको मोडल बनाउँदा बागमतीको स्वास्थ्य पनि जोडिने दृष्टिकोण बनाएको भए, यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई मिहिन ढंगले केलाएको भए विनाश हुँदैन थियो।
त्यसको लागि विकासप्रतिको बुझाइलाई अग्ला भवन, चौडा सडक, भीमकाय संरचना मात्रै हो भन्ने साँगुरो दृष्टिकोणबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छ। जब विकासको परिभाषालाई हामीले फराकिलो बनाउन थाल्दछौं, हामीले विनाश नगरी कसरी विकास हुन्छ भनेर भन्न छोड्छौं।
विकास र वातावरणीय विनासको कुरा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने क्रममा पनि बहसमा आएको थियो। लाखौँ रुखहरु काटिन्छन् भनेर यसको विरोध पनि भइरहेको छ। यस्ता कुराले त प्रत्येक आयोजना नबढ्ने भयो त?
मेरो बुझाई अनुसार, निजगढको एकतर्फी नबनाउने भनेर कसैले पनि विरोध गरेका छैनन्। म आफू विभिन्न देशका साठीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरु देखेको छु, पुगेको छु। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एयरपोर्ट चाहिन्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो असहमति छैन। वातावरणको पक्षमा तर्क गर्नेहरुले निजगढको लाभ हानीको कुरा गर्दा जसरी यसले यथास्थितिमा वातावरणीय हानीको पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ, त्यसलाई लाभहानीको हिसाबमा समेट्न पर्‍यो र त्यसको आधारमा विकल्पका ठाउँ र उपाय खोज्न सुझाएका हुन्।
तर यो निर्विकल्प हो भन्दै रुख काट्न हतारो गरेपछि बहस गर्ने ठाँउ नै भएन। मानिलिऔं, यसको विकल्पमा अन्य ठाँउमा, नभए कमभन्दा कम वातावरणीय, सामाजिक क्षति कसरी पुराउने भन्ने उपायको खोजी दोस्रो पक्ष हो। त्यसमा यसले पुर्‍याएको वातावरणीय क्षतिलाई अन्यत्र अपसेटिङ (यसको हानीलाई अर्को ठाँउबाट पूरा गर्ने) कुरा पनि पर्दछ।
यसलाई वातावरणमैत्री हिसाबले निर्माण गर्ने कुरा पनि हो। ठूलो घना जंगल मासेर बनाएपछि त्यसको नतिजास्वरुप जलजन्य प्रकोपबाट यति ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट कसरी बचाउने भन्ने प्रश्न पनि हो। जुन नाजायज प्रश्नहरु होइन। हामीले यत्रो ठूलो आयोजना बनाउँदै छौं तर यसका बारेमा उठेका विविध सवालहरुलाई जवाफ दिंदा र त्यसलाई सम्बोधन गर्दा आयोजनालाई फाइदा नै हुन्छ तर विकास विरोधी भनिदियो, प्रश्नको जवाफ दिन पनि परेन।
रुख काटौं, भोलि बन्ला नबन्ला देखा जाएगा भन्ने सोचले आयोजना बढाएर हुन्छ? यस्तो हचुवा पारा हाम्रो विकासको हरेक आयोजनामा देख्न सकिन्छ। एयरपोर्टकै कुरा गर्दा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थलको सुरुको डिजाइनमा विमानस्थलको गेटबाट प्लेनको ढोकासम्म सिधै पुग्ने प्यासेन्जर बोर्डिङ ब्रिज पनि रहेनछ।
त्यसको लागि बजेट बढाइएको समाचार पढ्दा म आश्चर्यमा परें। हरे! हामी कुन शताब्दीमा एयरपोर्ट बनाउँदै छौं जस्तो लाग्यो। त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण देखिने अल्पकालीन सोच हामीले बनाएका आकाशे पुलदेखि सडक सबैमा देखिन्छ। दुई तीन दशक अघि बागमती जोगाऔं भन्ने मान्छेहरुलाई यस्तै विकास विरोधी बिल्ला भिराइन्थ्यो। त्यतिबेला सामाजिक सन्जाल नभएकोले त्यो आवाज कम सुनिन्थ्यो। अहिलेको अवस्था तपाईंले देख्नुभएकै छ।
काठमाडौंको सडक धुलाम्मे पार्ने ठेकदारलाई धुलो उडाएको भनेर कतै कारबाही भएको मैले सुनेको छैन। जबकि त्यो धुलोको कारण हजारौं मान्छे मरेका छन्, दिर्घरोगी बनेका छन्। समाजलाई ठूलो आर्थिक र जनस्वास्थ्यको भार बोकाएको छ। त्यसलाई कारबाही गर्न थाल्ने भने प्रदुषण घट्थ्यो। धुलो नउडाइकन बाटो बनाउन सकिन्छ त। अन्यत्र गरिरहेका छन्।
त्यसो भए वातावरण विनाश बिना पनि विकास सम्भव छ?
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मलाई त्यस्तो सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। मानव जातिको बृहत्तर भलाईको लागि पनि त्यस्तो आर्थिक प्रणालीको खोजी हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ। हरेक चिजको सीमाना भएजस्तै पृथ्वीको पनि छ। प्रयोगशालामा एउटा पेट्री डिस (सानो सिसाको भाँडो) मा पानी, खाना राखेर ब्याक्टेरिया राखिदिनुभयो भने के हुन्छ?
ब्याक्टेरिया यति द्रुत गतिले जन्मन्छ र फैलन्छ कि कुरै नगरौं। त्यसपछि ब्याक्टेरियाको सन्तानले त्यो भाँडोको डाँडाकाडाँ सबै ढाक्छ। त्यसरी जन्मने बाँच्ने र फैलने प्रजातिलाई प्रकृति छनौटको हिसाबले सफल भनिन्छ, त्यसो गर्न नसक्नेलाई असफल। अनि के हुन्छ थाह छ? त्यहाँ खाना, पानीको अभाव भएर सबै ब्याक्टेरिया मर्छन्।
यो पृथ्वी त्यो प्रयोगशालाको काँचको भाँडो र त्यो ब्याक्टेरियालाई मानिस हो भन्न सक्नुहुन्छ। ब्याक्टेरियामा मात्र होइन, पृथ्वीमा सबैभन्दा सफल भनिएका प्रजातिहरुको दुखान्त त्यस्तै लोप हुने हो। यसको सीमितता हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसले असीमति ‘ब्ल्यांक चेक’ दिँदैन।
सन्तुलनको लागि चारवटा फेरबदल आवश्यक छन्। प्रकृतिको योगदानलाई विकासमा समेटन सक्ने दृष्टिकोणको निर्माण, व्यक्तिगत उपभोगमा फेरबदल, व्यवसायको काम गर्ने तरिकामा फेरबदल, सरकारको उत्प्रेरणा र दण्डको व्यवस्थामा फेरबदल आवश्यक छ।
मैले माथि नै भनिसकेको छु, प्रकृतिले मानव भलाईको लागि गरेको योगदानलाई अहिलेको आर्थिक प्रणालीमा आत्मासात् गर्ने। अहिलेको उत्पादन सम्बन्धले प्रकृतिको दोहनलाई सघाउने हिसाबले उत्प्रेरणा (incentive) दिइरहेको छ।
हिजो मानव जनसंख्या कम हुँदा त्यस्तो दोहनको प्रभाव ठूलो हुन्थेन किनभने प्रकृतिको पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कने गुण (जस्तै जंगल फडानी भएको ठाँउमा फेरी नयाँ उम्रने, नदीमा कम परिमाणका फोहर पानी मिसाउँदा, पानी आफै संग्लो हुने गुण) को कारण दोहनको असर देखिँदैन थियो। तर अहिले जनसंख्या वृद्धि, हाम्रा आवश्यकतामा आएको फराकिलोपनले गर्दा प्रकृतिको दोहन यति द्रुत र घनीभूत भएको छ कि प्रकृतिले पुरानै अवस्थामा फर्कनसक्ने गुण गुमाइसकेको छ। त्यसकारण अब दोहनलाई उत्प्रेरणा दिने प्रणालीको ठाउँमा संरक्षणलाई सघाउने दिने निति राज्य, व्यवसायले ल्याउन जरुरी छ।
म सानै हुँदा ८ वटा रारा चाउचाउको खालि खोल फिर्ता गरेमा कलम, कचौरा उपहार दिने गर्थ्यो। हिजो आज छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको भए, हाम्रा डाँडाकाँडा, नदीनाला प्लाष्टिकले भरिदैन थियो या कम पक्कै हुन्थ्यो।
तेश्रो, सरकारले वातावरण संरक्षणका कानुन जसको उद्देश्य आर्थिक विकाससँगै वातावरणलाई कम हानी गर्ने वा संरक्षण गर्ने छ, त्यसको कडाईका साथ लागू गर्ने हो। काठमाडौंको सडक धुलाम्मे पार्ने ठेकदारलाई धुलो उडाएको भनेर कतै कारबाही भएको मैले सुनेको छैन। जबकि त्यो धुलोको कारण हजारौं मान्छे मरेका छन्, दिर्घरोगी बनेका छन्। समाजलाई ठूलो आर्थिक र जनस्वास्थ्यको भार बोकाएको छ। त्यसलाई कारबाही गर्न थाल्ने भने प्रदुषण घट्थ्यो। धुलो नउडाइकन बाटो बनाउन सकिन्छ त। अन्यत्र गरिरहेका छन्।
चौथो, मानवीय उपभोगमा परिवर्तन ल्याउने। हामीले प्रकृतिको दोहन कम भएका, वातावरणलाई हानी नहुने किसिमका वस्तुहरुको उपभोग गर्ने। यी कामहरु सुरुमा सानो हुन्छ, यो विस्तारै बढाउँदै लग्नुपर्छ।
कस्तो अवस्थालाई वातावरण विनाश मान्ने?
मैले माथि पनि भनिसके प्रकृतिको दोहन त्यो लेवलमा गर्ने जुन लेवलमा पुगेपछि प्रकृतिले पुरानै अवस्था वा लयमा फर्किने क्षमता गुमाउँछ, त्यसलाई विनाश भन्ने हो कि?
देश बनाउँछु भन्ने भावनामा बगेर नेपाल फर्कनुभन्दा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताले सकेको योगदान दिन्छु र असल नागरिक बन्छु भन्ने सोचले फर्किने हो भने सायद फ्रस्टेसन हुँदैन।
तपाईले केही समय पहिले वातावरण सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय प्रतिवेदन पनि सहलेखन गर्नुभयो। विश्वको अहिलेको वातावरण विनाशको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
मैले गत वर्ष प्रकाशित वातावरणीय सेवा र जैविक विविधता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनमा सहलेखनको साथै विश्वमा ठूला वैज्ञानिक नीतिहरु कसरी बन्ने रहेछ, सरकारहरुले कसरी निर्णय गर्ने रहेछन् भनेर सिक्ने मौका पाएको थिए।
म लगायतका विश्वका १६० भन्दा बढी विज्ञहरुले मिलेर ३ बर्ष लगाएर लेखिएको १८०० पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन त्यस विषयको अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो, अध्यावधिक र विश्वसनीय प्रतिवेदन हो। उक्त प्रतिवेदनले उठाएका तथ्यको आधारमा अबको १० वर्षको विश्वको जैविक विविधता संरक्षणको रणनीति बन्ने हो।
तर कोभिडको कारण चीनमा हुने भनिएको उक्त रणनीति बनाउने दुई सय जति राष्ट्रको सम्मेलन रोकियो। हामीले उक्त प्रतिवेदनमा पाएको तथ्यले पृथ्वीको अवस्थाको दुरुह चित्र प्रस्तुत गरेको छ। पृथ्वीको वातावरणीय स्वास्थ्य नराम्रोसँग खलबलिएको छ। मानिसको लागि चाहिने खाद्यान्न, बालीनाली, औद्योगिक उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भए पनि प्रकृतिले दिने अन्य सेवा र सुविधाहरुमा व्यापक कमी आएको छ। पृथ्वीको दुई तिहाईभन्दा बढी क्षेत्रफल मानव चपेटामा परेका छन्।
यहाँको फोक्सो मानिने उष्णवन क्षेत्रको १ अर्ब हेक्टर वन फडानी भएको छ। पृथ्वीको मृगौला भनिने सिमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भूभाग नासिएको छ। पृथ्वीबाट थुप्रै जीवजन्तु लोप भएका छन्। यस्तै दोहन कायम रहे अबको दश बर्षभित्रमा १० लाख जीवजन्तु लोपहुने प्रक्षेपण छ।
वायू, प्लाष्टिक प्रदुषण बढ्दो छ। मिचाह प्रजातिका वनस्पतिहरु फैलिँदो छ। समग्रमा पृथ्वीको वातावरण बिग्रदो छ र दुर्भाग्यवश त्यसको कारक हामी सबैभन्दा बुद्धिमान भनिएको मानव जाति बन्न पुगेका छौं।
अन्त्यमा, तपाई नेपाल फर्कनुभयो। तपाईं जस्तै विदेशमा पढेका, काम गरेका र नेपाल फर्कन चाहनेहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
विदेशिने मध्ये नेपाल फर्किएको न त म पहिलो हुँ, न त अन्तिम। यो प्रकृया हो। कतिपय मानिसहरु नेपाल बनाउने भन्दै नेपाल फर्किएका छन्। कतिपय हल्लाखल्ला नगरी सुटुक्क आएर काम गरिरहेका छन्।
सायद पत्रिकाहरुमा लेखिरहने भएकोले होला मैले यसरी आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाए। म देश बनाउँछु भन्ने ठूलो महत्त्वाकांक्षा राखेर फर्किएको होइन। मैले मेरो सीमितता बुझेको छु। मेरा निश्चित योजनाहरु छन् जुनबारे माथि नै भनिसकें। म कसैको आशा गरेर फर्किएको पनि होइन।
मेरो अनुभवमा आधारित सल्लाह दिन सक्ने स्थानमा छु भने मैले भन्ने त्यही हो। आफ्नो सीमितता बुझ्नुस्। धेरैसँग अपेक्षा नर्गनुस्। आफ्नो बालबच्चा पढाउने, सामान्य सहज जीवन कसरी बिताउने, के र कहाँ काम गर्ने भन्ने कम्तिमा पाँच बर्षको राम्रो योजना बनाउनुस् र त्यसको तयारी गर्नुस्।
फर्कनुभन्दा एक बर्ष पहिले अलिकता गृहकार्य गर्नुस्। देश बनाउँछु भन्ने भावनामा बगेर नेपाल फर्कनुभन्दा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताले सकेको योगदान दिन्छु र असल नागरिक बन्छु भन्ने सोचले फर्किने हो भने सायद फ्रस्टेसन हुँदैन।
Category: Interview, News
← कोरोनापछिको पृथ्वी : सम्मान अब वातावरणलाई
कोरोना महाव्याधीमा कुसमाचार →